မာ့ခ်၏ ကိုယ်ပိုင် အတဿ္တများ: September 2009
McDonalds - everybody knows - so instead of burgers, watch the Model Girl
McDonalds - everybody knows - so instead of burgers, watch the Model Girl, its better, isnt it?
ရေးသားသူ : မာ့ခ် နေ့စွဲ : Wednesday, September 30, 2009 1 comments
ကဏဿဍ : Humor
#Memo - Google Wave will release tomorrow night for 100 thousands people
goolge wave နက်ဖြန်ထွက်မယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ကြိုလျှောက်ထားတဲ့သူ ၁ သိန်းအတွက်လို့ ပြောပါတယ်။
ကြားတော့ ကြားမိတယ်။ ဘာမှန်း သိပ်မသိတာနဲ့ မစမ်းဖြစ်ဘူး။
လျှောက်ထားမိလား မလျှောက်ထားမိဘူးလားတောင် မမှတ်မိတော့ဘူး။ လျှောက်ထားမိရင်တော့ စမ်းကြည့်ရမယ်။
Python API တွေတွေ့တယ်။ အားမှပဲ စမ်းကြည့်ရမယ်။
#Thats why Google released Chrome Frame, may be it is brillient idea for them :P
ရေးသားသူ : မာ့ခ် နေ့စွဲ : Tuesday, September 29, 20090comments
ကဏဿဍ : Google
ရေးသားသူ : မာ့ခ် နေ့စွဲ : Tuesday, September 29, 2009 1 comments
ရေးသားသူ : မာ့ခ် နေ့စွဲ : Tuesday, September 29, 20092comments
ဆိုဒ်တစ်ခုနဲ့ ဆင်တူတဲ့ ဟာတွေကို ပြပေးတယ်။ မိုက်တယ်။
google လို့ရှာရင် အခြား search engine တွေ ရှိသလောက် လာပြတယ်။
ရေးသားသူ : မာ့ခ် နေ့စွဲ : Saturday, September 26, 20092comments
ကဏဿဍ : Search
#Memo - Minefield crashed with XMarks - Moving one step back to Namoroka
I am using Minefield around 1 year now, no problem at all, but now something start not working.
Gecko 1.9.3 alpha - Minefiled Latest Trunk - Mozilla Firefox 3.7 alpha pre Crashed onload when XMarks is installed - even xmarks 3.3.3 or 3.3.4 also not working.
XMarks seems saying its because of Mozilla bug, but Others Extensions like NoScript, AdBlock Plus, Firebug are fine.
So, I have to move one step back to Firefox 3.6 Namoroka, for Gmail, I am using now Google Chrome 4.*.
I really wish XMarks to do some workaround for that.
ရေးသားသူ : မာ့ခ် နေ့စွဲ : Thursday, September 24, 20090comments
ကဏဿဍ : Browser
Windows Server 2008 လိုင်စင် ၄ခု
Visual Studio 2008 Professional လိုင်စင် ၃ခု
စတာတွေ ၃နှစ်စာ ရမယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။
လျှောက်တဲသူဟာ လူ ၁၀ ယောက်ထက်နဲပြီး အခြားသူအတွက် ရေးပေးတဲ့ ကုမဿပဏီဖြစ်ရမယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်။
(May be you can do web site for your GirlFriend)
၃နှစ်ပြည့်ရင် ဒှေါလာ ၁၀၀ ပေးလိုက်ရင်ပြီးတယ်လို့ လဲဆိုထားပါတယ်။ ဝယ်ချင်ရင်လည်း လျှော့ဈေးနဲ့ ရမယ့်ပုံပှေါပါတယ်။
Visual Studio 2010 ကို အဆင့်မြှင့်ချင်ရင်လည်း ရတယ်လို့ ပြောတာလဲ တွေ့မိပါတယ်။
လျှောက်ပြီး ၆လကြာရင် Project တစ်ခုတော့ တင်ပြရမယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်။ :-)
<You can do small Search Engine with C# and MSSQL 2008> :-)
ရေးသားသူ : မာ့ခ် နေ့စွဲ : Thursday, September 24, 20092comments
I really wanted to break that (google jobs) code, but finally, its was just nothing more than counting characters, and adding 1 and 0.
8MLDQ6 T UI
6TFML RH AA
python code to decrypt / calculate phone number from that
"+1-"+"".join([str(len(x)) for x in open("google.txt").read().replace("\_r","").replace("\_n","").split()])+"0"
When you called, there is automatic answering machine, saying its Google, and to tell your name and ask you Phone number.
# May be This is done by TechCrunch or MIT or can be by any other too, than Google.
Update at Sept 23 3:20 JST
Sorry, It wasaTRAP!!!, the number (617 274 8660) I got is also by Google Jobs,
so I under-estimated or thought as It was justajoke by someone. But actually It isareal code.
correct number is is 617 639 0570 (extension 10) and
de-ciphering method can be find here,
anyway, here is present python codes to de-cipher it :-)
x="8MLDQ6 T UI 6TFML RH AA NRA6Q 8EFL DMQ86II2 O3 2S5J 13JXOJ"
print "".join([b[a.index(x)] for x in x])
CONGRA T UL ATION SK EE PSEAR CHIN GORCALL6 17 6390 570X10
ရေးသားသူ : မာ့ခ် နေ့စွဲ : Tuesday, September 22, 20095comments
ကဏဿဍ : Google, Python|Ruby
(ဖေမြင့်၏ ကိုယ့်ထူးကိုယ်ချွန်သမားများအတွက် လက်စွဲစကားများ စာအုပ်မှ)
သင့်အောင်မြင်မှုနှင့် စိတ်ချမ်းသာမှုကို သင်ကိုယ်တိုင်ပင် တောင်းဆိုယူရလိမ့်မည်။
ကမဿဘာလောကသည် သင့်အား ဘာကိုမျှ အသားလွတ်ပေးမည် မဟုတ်။ ဘယ်သူကမျှ သင့်ဆီလာပြီး အသာ ပခုံးပုတ်ကာ ရော့... ယူဗျာ၊ အခွင့်အရေးတွေ ဟုပေးမည်မဟုတ်။ ပခုံးပုတ်၍ လှည့်အကြည့်တွင် မျက်နှာကို လက်သီးပြင်းပြင်းနှင့် ထိုးထည့်လိုက်ခြင်းမျိုးသာ သင် ခံချင် ခံရနိုင်သည်။
အလကား ရနိုင်တာ ဒါမျိုးပဲ ရှိသည်။
ဒါကို လူအများလည်း သိကြသည်။ သိ်ု့သှော ဒါကိုသိလျက် သူတို့ ဘယ်လိုတွေးကြသနည်း။ ဘယ်သူကမှ ငါ့ကို မကူညီလျှင် ငါဘယ်မှာ အောင်မြင်နိုင်မည်လဲ ဟူ၍ပဲ တွေးသည်။
မည်သူမျှသင့်ထံလာပြီး အခွင့်အရေးတွေ မပေးတော့ဘူးဆိုတော့ကော ဘာဖြစ်သနည်း။
သင့်အား အောင်မြင်သူ တစ်ဦ်းဘဝ ရောက်ရှိအောင် တွန်းပို့ မောင်းနှင်ပေးမည့် စွမ်းအားတွေ သင့်ကိုယ်ထဲမှာ အပြည့်ရှိနေသည်။ သင်၌ လိုအပ်နေသည်မှာ သင်သည် ဤလောက၌ ထိုက်တန်သော တစ်နေရာကို ရပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟူသော ယုံကြည်ချက်နှင့် ထိုအရာကို ရအောင် ယူမည်ဟူသော ခိုင်မာသည့် သနဿနိဋဿဌာန်တို့သာ ဖြစ်သည်။
ဒါတွေကို တခြားက မရနိုင်။ သင့်ကိ်ုယ်တိုင်ထံမှပင် တောင်းခံယူရပေမည်။
သင့်အား မည်သူမျှ အပှေါအမြင့်သို့ ရောက်အောင် ကြိုးဖြင့် ဆွဲမတင်နိုင်။ ကြိုးကို ကြာကြာ ဆုပ်ကိုင် မထားနိုင်သော အကြောင်းကြောင့်ပင် သင်ပြုတ်ကျမည်ဖြစ်၏။ သို့သှော ကိုယ့်ခြေထောက်ပှေါကိုယ် ရပ်၍တက်လျှင်ကား အမြင့်ဆုံးတောင်ထိပ်သို့ ရောက်အောင်ပင် သင်တက်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ရေးသားသူ : မာ့ခ် နေ့စွဲ : Monday, September 21, 20094comments
ကဏဿဍ : Quotes, ဖေမြင့်
ရေးသားသူ : မာ့ခ် နေ့စွဲ : Sunday, September 13, 2009 20 comments
3.14 ကို မှန်ထောင်ကြည့်ရင် PI.E လို့ရတယ်ဆိုပါလား။ ဘာလို့ အရင်က သတိမထားမိပါလိမ့်။
ရေးသားသူ : မာ့ခ် နေ့စွဲ : Sunday, September 13, 2009 1 comments
You may interested, if you watch those movies and songs.
# btw, I am not involved in making that site :P
ရေးသားသူ : မာ့ခ် နေ့စွဲ : Sunday, September 13, 20090comments
တှောနေးဒိုး - Tornado - Web Server written in Python
Facebook ရဲ့ FriendConnect ဆိုတဲ့ နေရာမှာ အသုံးပြုထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ တစ်စကဿကန့်ကို request ထောင်နဲ့ချီပြီး အလုပ်လုပ်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။
ထွက်ပြီး တစ်ရက်အကြာ မှာ http://blog.shibu.jp/article/32075270.html ဂျပန်ဘာသာကို ဘာသာပြန်တဲ့သူတွေက ပြန်ပြီးသွားပါပြီ။ :-)
nginx ကို ဆာဗာရှေ့မှာခံပြီး အလုပ်လုပ်ရင် ပိုမြန်ပုံရပါတယ်။ ကျနှောတော့ Search Engine မှာ သုံးဖို့ စာရင်း List ထဲ ထည့်ထားလိုက်ပြီ။
ရေးသားသူ : မာ့ခ် နေ့စွဲ : Saturday, September 12, 2009 1 comments
ကဏဿဍ : Research
I say ဖြတ်ညှပ်ကပ်, because when you look at left upper corner, the shaking of camera is looping in same patterns.
ရေးသားသူ : မာ့ခ် နေ့စွဲ : Friday, September 11, 2009 1 comments
ကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေ ဘာလုပ်နေကြပါလိမ့် :P
ဘာလို့ ဒီလူက မှောက်နေရတာလဲ မသိဘူး :P
တစ်ယောက် ခုံအောက်ကို ငုံကြည့်နေတာ ဘာလို့ဘာလိမ့် ...
သင် ကယ်ဆယ်ရေး ဝန်ထမ်းဖြစ်ရင် ဒါမျိုးလဲ ကယ်ရမယ်ထင်တယ်။ :P hahaha :P
ရေးသားသူ : မာ့ခ် နေ့စွဲ : Friday, September 11, 20095comments
Php နဲ့ ဂျီမေးပို့နည်း - Sending Email using Gmail from Php (Hello World!)
Php နဲ့ ဂျီမေးပို့နည်း Sending Email using Gmail from Php (Hello World!)
$passwd="[email protected]'s password"
'host'=> 'tls://smtp.gmail.com','port'=> 465,'auth'=> true,'debug'  => false,
'password' => $passwd
$smtp->send($to, array('From'=>$from,'To'=>$to), "Hello World!");
# Be Good, Don't be Evil :-)
ရေးသားသူ : မာ့ခ် နေ့စွဲ : Monday, September 07, 20093comments
ကဏဿဍ : PHP
ပိုင်သွန်နဲ့ ဂျီမေးပို့နည်း - Sending Email using Gmail from Python (Hello World!)
ပုံမှန်အီးမေးဆာဗာထောင်ထားတဲ့စက်ဆိုရင်တော့ လော့ခ်အင်တွေ ဟယ်လိုတွေ ပါတွေမလိုပါဘူး။ ဂျီမေးကို သုံးပြီး ပို့ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
passwd="[email protected]'s password"
m.sendmail(user, to, "From: %s\_nTo: %s\_n\_nHello World!"%(from,to))
ရေးသားသူ : မာ့ခ် နေ့စွဲ : Thursday, September 03, 20093comments
ကဏဿဍ : Python|Ruby